20+ Cajiib ah saameynta jQuery | Abuurista khadka tooska ah
Dhammaantiin waad ogtahay in jQuery uu yahay janno dhab ah oo loogu talagalay saameynta garaafka markay tahay sameynta animations sida leexashada, boodhadhka ama sliders, marka waxaan arki doonnaa isku duubnaan aan aad ula yaabi doonno.
Qaar ka mid ah saameyntu waxay horeyba ugu dhawaaqi doonaan sida Apple oo leh Muuqaalka 'Retina Display of your iPhone 4', Raadinta goobooyin aan horay ugu aragnay iskudubaridyo kale ama saameynta 'hover' oo aad uxiisa badan.
Boodka ka dib way baxaan.
1 1.Apple like retina saameyn
3 3.Badhigista Sawirka Qurxoon ee Qurxoon
4 Muuqaalka sawirada 4.Bg
5 5.Babble Navigation
6 6.Garitaanka gelitaanka sare
7 7. Karooto hal abuur leh
10 10. Sanduuqa rogroga
11 11.Ka wareejinta gallery
13 13.Image qulqulka
14 14.Intractiveive sawirka
15 15.Jqfancy kala guurka
16 16.Jquery dj geesi
17 17. Qalabka loo yaqaan 'Jquery plugin' ee khariidadaha is-dhexgal kara
19 19.Waxaad duubtaa sawir -gacmeedka
20 20. Sawir qaadis
21 21.Ciid deg deg ah
22 22. Tilmaamaha macnaha ee dhuumashada
23 23. Sanduuqyada lagu kala baxo
24 24. maktabadda zoomer
1.Tufaaxu wuxuu u eg yahay saamaynta isha
3.Navigation Background Image qurux badan
4.Bg Muqaal Muqaal
6.Garitaanka gelitaanka sare
7.Karootada hal abuur leh
14.Sawir dhexdhexaad ah
15.Kala guurka Jqfancy
16.Jquery dj geesi
17.Qalabka loo yaqaan 'Jquery plugin' ee khariidadaha is-dhexgal la arki karo
21.Ciid degdeg ah
22.Talooyin ku saabsan duruufaha isdajinta
23.Sanduuqyada lagu riixo
24. maktabadda zoomer
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » jQuery » 20+ Saamaynta jQuery ee dhalaalaya
Fany, waan eegay mana garanayo sababta aad khalad u samaynayso, mabda 'ahaan dhib malahan meesha aad dhigato + inta aad si wanaagsan ugu dhaqaaqdo ...
Waan ka xumahay kumana caawin karo.
Ku jawaab Carlinhos
Waad salaaman tahay! Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aad i siiso wax yar oo fiilo ah… waad aragtaa, waxaan la shaqeynayaa lambarka 14 ee liistadan, oo leh sawir wada-hadal ah. Waa wax layaableh waxa la samayn karo, laakiin waan xayirmay, ma dhaqaaqi karo "+" maxaa yeelay, haddii aan dhaqaajiyo, sharraxu igama soo baxayso agtayda sidoo kalena sawirku kuma furmayo laydhka saamayntiisa ... aan tagno masiibo guud ... fikradayda ayaa ah inaan sawir la galo 15 qof mid walbana uu leeyahay shaqsiyaddiisa «+», laakiin kumana koobi karo sidoo kale maxaa yeelay markaan koobiyeeyo oo aan dhajinayo koodhka, isna ma shaqeynayo ... Waan waalanayaa ^^ waxaad i siin kartaa gacan yar fadlan ?? Aad baad u mahadsantahay horay !!!! Waxaan rajeynayaa jawaabtaada !!
Jawaab Fany Lopez
Hagaag waad mahadsan tihiin si walbooy ahaataba !!! Haye, oo sidee u sameysaa si aad u dhaqaaqdo? Aan aragno haddii aan khalkhal galinayo, lol waxaan isku dayi doonaa inaan fiiriyo marki aan tobnaad la joogo =)
Boggu uma fiicna Chrome / Mac OSX;)
Sidoo kale shilalka FF 3.6 / Mac OSX;)
Waad ku mahadsantahay caawimada, waa wax aad u wanaagsan
waaw! Waa wax cajiib ah! Maanta waxaan bilaabay isticmaalka jquery.
Ku jawaab Crayola
Shabakadda Adhara dijo
Aad u fiican, laakiin waxaan raadinayaa saameyn cusub
Ku soo jawaab Adhara Web
Waad salaaman tahay, sidee baan u abuuri karaa gif taas oo kubad heysata iskudhafka sawirada qoysku ay meerto tahay, waxaan ahay hiwaayad Waad ku mahadsan tahay kaalmadaada, goob kasta oo bilaash ah oo khadka tooska ah ah? Wax badan ayaan weydiinayaa sax? Hahaha mahadsanid
Ku jawaab bikrania